फोटोशपमा ड्राइंग प्रभाव कसरी बनाउने चरण by | क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशप हो एक कलात्मक स्पर्श दिन एक महान उपकरण तपाईंको फोटोहरूमा। यस ट्यूटोरियलमा हामी तपाईंलाई कसरी फोटोलाई वास्तविक पेंसिल रेखाचित्रमा रूपान्तरण गर्ने भनेर बताउँदछौं। यो अति सजिलो छ! यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने फोटोशपमा कसरी ड्राइंग प्रभाव बनाउने, यो पोष्ट याद नगर्नुहोस्।
1 छवि खोल्नुहोस् र पृष्ठभूमि नक्कल गर्नुहोस्
2 डिसेच्युरेट लेयर १ र लेयर २ सिर्जना गर्नुहोस्
3 गौसियन ब्लर फिल्टर लागू गर्नुहोस्
4 बर्न उपकरणको साथ अन्तिम स्पर्श
छवि खोल्नुहोस् र पृष्ठभूमि नक्कल गर्नुहोस्
हामीले गर्ने पहिलो कुरा हो हामीले सम्पादन गर्न चाहेको फोटो खोल्नुहोस् फोटोशपमा तपाई केवल फाँसी तान्न सक्नुहुनेछ र यो स्वत: खुल्नेछ। तल तह हो हामी दोब्बर हुनेछौंयो गर्नका लागि माथिको मेनुको "लेयर" ट्याबमा जानुहोस् र "डुप्लिकेट लेयर" मा क्लिक गर्नुहोस्। हामी यसको प्रतिलिपि नाम दिनेछौं "तह १".
डिसेच्युरेट लेयर १ र लेयर २ सिर्जना गर्नुहोस्
हामीलाई आवश्यक छ "तह १" कालो र सेतो हुन। यो गर्न, यसलाई चयन गर्नुहोस्, माथिको मेनुमा "छवि" ट्याबमा जानुहोस्, "सेटि "हरू" र क्लिक गर्नुहोस् "डिस्चरेट"। अब आउनुहोस् नक्कल "तह १"हामी यसको प्रतिलिपि नाम "लेयर २" दिनेछौं। अब हामी यसको लागि यस नयाँ लेयरको रंगहरू उल्टाउनेछौं प्रकार आदेश + io नियन्त्रण (म्याक) + i (विन्डोज)। जब तपाईंसँग नकारात्मक छवि हुन्छ, ब्लेन्डिंग मोड परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईं यो मेनूमा गर्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको छविमा देखा पर्दछ, र d्ग डज विकल्प चयन गर्नुहोस्। छवि पूर्ण खाली हुनेछ, तर चिन्ता नलिनुहोस्, यसलाई ठीक गर्नुहोस्!
गौसियन ब्लर फिल्टर लागू गर्नुहोस्
मा "तह १" हामी एक लागू गर्नेछौं धमिलो फिल्टर। ट्याबमा जानुहोस् "फिल्टर" शीर्ष मेनूमा, क्लिक गर्नुहोस् "ब्लर" र "गौसियन ब्लर" चयन गर्नुहोस्। एउटा सानो विन्डो खुल्नेछ जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ परिमार्जन गर्नुहोस् को मान रेडियो। तपाईले त्यसलाई उच्च मान दिनुहुन्छ, ड्राइंगमा विस्तृत स्तरको अधिक स्तर हुनेछ। त्यसो भए म यसलाई बायाँ छोड्न रुचाउँछु, at मा, त्यो पेन्सिल ड्राइंग प्रभावलाई सुदृढ पार्न।
बर्न उपकरणको साथ अन्तिम स्पर्श
के हामीसँग पहिले देखि नै एक ड्राइंग को जस्तो देखिन्छ तर परिणाम अझ राम्रो बनाउनको लागि एक कदम अगाडि जानुहोस्। उपकरणपट्टीमा हामी फेला पार्न लागेका छौं उपकरण बर्न गर्नुहोस्। उपकरण विकल्प मेनूमा तपाईं ब्रशको प्रकार र आकार परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सपोजर स्तर समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु गोलाकार ब्रश फैलाउनुहोस्, ठुलो र राख्नुहोस् २० देखि २%% सम्म जोखिम। अब आउनुहोस् छविको विशेष क्षेत्रहरू रंग्नुहोस्, यसको साथ हामी एक प्राप्त गर्नेछौं छायांकन प्रभाव जसले चित्रको उपस्थिति सुधार गर्दछ। मैले कपाल, नाक, आँखा, चिनको क्षेत्रहरू पेन्ट गरें तपाईं अन्तिम नतिजाको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? यदि तपाईं आफ्ना फोटोग्राफरहरूलाई कलात्मक टच दिन ट्रिकहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो ट्यूटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोशपमा स्मार्ट फिल्टरहरू कसरी लागू गर्ने.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » फोटोशपमा कसरी ड्राइंग प्रभाव बनाउने